Galmudug”Maxaabiista kujirta Xabsiga Gaalkayo ee dembiyada fudud cafis ayaa loo fidinayaa | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Galmudug”Maxaabiista kujirta Xabsiga Gaalkayo ee dembiyada fudud cafis ayaa loo fidinayaa
Galmudug”Maxaabiista kujirta Xabsiga Gaalkayo ee dembiyada fudud cafis ayaa loo fidinayaa
Muqdisho(SONNA) Ku dhawaad 40 maxaabiis oo u xiran faldembiyeedyo kaladuwan ayaa ku xiran Xabsiga Dhexe ee magaalaad Gaalkacyo ee Dowlada Goboleedka Galmudug, kuwaasi oo xaaladooda ay tahay mid laga deyrinayo.
Mas’uuliyiin katirsan Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa sheegay in dib loo eegi doono xaaladda Maxaabiistaasi,islamarkaana cafis loo fidin doono dadka dembiyadooda ay fudud yihiin oo ku jira Xabsiga, kadib kormeer ay ugu kuurgalayeen xaaladda Maxaabiista oo ay halkaasi ku tageen Wasiiro iyo mas’uuliuyiin kale oo katirsan Galmudug.
Wasiirka Dastuurka iyo dib u heshiisiinta Dowlad Goboleedka Galmudug Maxamed Cabdi Colaad ayaa sheegay in loo baahan yahay sidii daryeel wanaagsan ay u helilahaayeen dadkaasi Xabsiga kujira.
“Waxyaalo badan ayaa soo aragnay,baahiyo badan ayaa jira,wixii aan aragnay waan lalaabanaynaa, go,aan ayaa laga gaarayaa, in maxaabiista dembiyada fudud cafis loogu fidin lahaa maadaama waqti Ciid ah la joogo,sidoo kale daryeel caafimaad ayay baahi u qabaan”, Ayuu yiri Wasiir Colaad.
Maxaabiista kujirta Xabsiga magaalada Gaalkacyo ayaa loo soo qab qabtay faldembiyeedyo kaladuwan,oo ay kujiraan dhac iyo dhibaatooyin kale oo ammaanka laxiriira.
Previous articleDEG DEG: Waberi oo usoo guddubtay kama dambeysta tartanka degmooyinka
Next articleMasar oo si kulul u cambaareysay weererkii Maleeshiyada Shabaab ay ku qaadeen Deegaanak Buulo-Guduud